Systemlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri, na ndị na - enye ya - China Water System Valves Manufacturers
1318 Nrụgide Mbelata Valve
Nkọwa Na-ebelata valvụ: na-ebelata nrụgide ntinye dị elu na nrụpụta dị ala. Outnọgide na-enwe nrụgide na-aga n'ihu n'ọtụtụ dịgasị iche iche. Pilot na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-enweghị nrụgide na-ada. Tinyekwa mgbali bụ kemeghi na singe ịghasa. Enwere ike ịchekwa ya na-ewepụghị eriri ọkpọkọ. Kemeghi oghere / nzaghachi ọsọ. Iwu kwụsiri ike na nso nso-efu. Flanged na mkpọpu ala kwekọrọ na EN1092-2 PN10 / 16; ANSIB16.1 Klas125. Grooved ọgwụgwụ na-ekwenye na AWWA ...
Facilitieslọ ọrụ anyị ejikere nke ọma na njikwa njikwa ogo dị elu na ọkwa niile nke ọgbọ na-enyere anyị aka ịkwado afọ ojuju zuru ezu maka 2108 AWWA C504 C516 Double Eccentric Butterfly Valve, Ngwa niile na-abịa ezigbo mma yana ọrụ zuru oke mgbe ahịa gachara. Market-gbakwasara na ndị ahịa na-agba mbọ bụ ihe anyị na-anọ mgbe. Jiri ezi obi na-atụ anya inwe mmeri-Win! Anyị mma-onwem ụlọ ọrụ na ahụkebe n'elu mma management nile nkebi nke g ...
GD1 GD2 BS5163 AWWA C515 NRS nwere ike ịnagide ọnụ ụzọ ámá Valve na Mgbatị Spindle
Nkọwa GD1: 150≤H1≤1000, GD2: H1≥1000. Ebe dị anya site na etiti akara nke valvụ ahụ na ala ga-enye ndị ahịa ya. Mgbe ị na-enye data ahụ, biko jide n'aka na njehie ahụ agaghị agafe ± 20mm. Ejiri T-spana: 10 set nke ọnụ ụzọ ámá ọnụ ụzọ ámá nwere otu T-spana. Ahịa kwesịrị ịzụta a spana ma ọ bụrụ na ha kwesịrị ọzọ. Onu uzo uzo a nke anakpo BS 5163 nwere uzo uzo ma obu FM / UL NRS nke noo ...
Nkọwapụta Na-enye ọrụ nke Mwepụta Ikuku na Ikuku / Vacuum Valves. Na-ekpuchi ikuku dị ukwuu na mmalite usoro. Na-enye nchebe pụọ na ida ọkpọkọ n'ihi agụụ. Igbapu akwakọba obere oke ikuku n'oge ọrụ sistemụ nkịtị. NPT ma ọ bụ Metric eri nke uzo mmiri. Nrụgide ọrụ na ọkụ 16bar gosiri na -10 Celsius C na 120 Celsius. Mkpuchi Corrosion Protection Fusion bonded mkpuchi ma ọ bụ mmiri mmiri epoxy ese ime na mputa. Ihe nkọwa Bo ...
Nkọwapụta Na-enye ọrụ nke Mwepụta Ikuku na Ikuku / Vacuum Valves. Na-ekpuchi ikuku dị ukwuu na mmalite usoro. Na-enye nchebe pụọ na ida ọkpọkọ n'ihi agụụ. Na-etinye atụmatụ abụọ n'ime otu ehi, kọmpat na akụnụba. NPT ma ọ bụ Metric eri nke uzo mmiri. Nrụgide ọrụ na ọkụ 16bar gosiri na -10 Celsius C na 120 Celsius. Corrosion Protection Fusion bonded mkpuchi ma ọ bụ mmiri mmiri epoxy ese ime na exteri ...
Nkọwapụta Obere akụkụ nke 1/16 na. (1.6mm) ịhapụ ikuku n'okpuru nrụgide n'oge ọrụ pipeline nkịtị. Ejikọtara mmiri n'elu ikuku site na usoro njikọ nke nwere ike ịrụ ọrụ vent ahụ n'okpuru nrụgide pipeline zuru ezu. NPT ma ọ bụ Metric eri nke uzo mmiri. WRAS kwadoro. Nrụgide ọrụ na ọkụ 16bar gosiri na -10 Celsius C na 120 Celsius. Mkpuchi Corrosion Protection Fusion bonded mkpuchi ma ọ bụ mmiri mmiri epoxy ese ime na mputa. ...
9208 Akpaaka Ikuku Valve
Nkọwapụta 9208 bụ valvụ ikuku na-akpaghị aka. Oche ahụ na-agbanwe agbanwe na-enye akara akara 100% tụkwasịrị obi. Otu ime ụlọ na-enye ọrụ ka mma karịa atụmatụ ụlọ abụọ. Ihe oriri na iyuzucha oke nwere ike iru ọsọ nke ụda. Ihe a haziri ka odi nchara nchara nchara nchara. EPDM akara mgbaaka. Flanged na mkpọpu ala kwekọrọ na EN 1092-2 PN16 (typesdị ndị ọzọ dị na arịrịọ). Oluchi nwanyi thread acc. Iji DIN ISO 228. ...
Nkọwapụta Otu ụlọ okpukpu abụọ okpukpu abụọ ikuku ikuku na ikuku na-ewepu valvụ akpaka. Ezubere iji rụọ ọrụ na mmiri mmiri na-ebu ihe siri ike dịka nsị mmiri na nsị. Hapụ ikuku n'oge ị na-akwụ ụgwọ nke usoro ahụ na ikuku ikuku mgbe ị na-ekpochapu usoro. Nchịkọta zuru oke nke mmiri mmiri site na usoro akara ahụ na-enye ọnọdụ ọrụ kacha mma. All metal akụkụ mee nke igwe anaghị agba nchara. Flanged na mkpọpu ala kwekọrọ na EN1092-2 PN16 (typesdị ndị ọzọ ar ...
Nkọwapụta Mgbapụta ikuku ikuku nke gbakọtara obere ikuku n'oge ọrụ sistemụ nkịtị. Kwe ka ikuku ikuku buru ibu n'oge igba nke pipeline. Kwe ka ikuku nke nnukwu ikuku n'oge ijuputa pipeline. Inye nchedo site na pipeline pipeline n'ihi agụụ. Flange na mkpọpu ala soro EN 1092-2 PN16 (typesdị ndị ọzọ dị na arịrịọ). Arụ ọrụ Pressure na okpomọkụ 16bar gosiri na -10 Celsius C na 120 Celsius ..
9100 Single Orifice Ikuku Enyemaka Ikuku
Nkọwapụta Na-enye ọrụ nke Ntọhapụ Ikuku na Val I Vacuum Valves. Na-ekpuchi ikuku dị ukwuu na mmalite usoro. Na-enye nchebe pụọ na ida ọkpọkọ n'ihi agụụ. Na-etinye atụmatụ abụọ n'ime otu valvụ, kọmpat na akụnụba. Flange na mkpọpu ala ka EN1092-2 PN10 / 16; ANSI B16.1 Klas125. Nrụgide ọrụ na ọkụ 16bar gosiri na -10 Celsius C na 120 Celsius. Corrosion Protection Fusion bonded mkpuchi ma ọ bụ mmiri mmiri ep ...
Nkọwapụta Valves na-agbaso DIN3356. Oche Metal. Kemeghi azuokokoosisi akara. Mbukota replaceable n'okpuru nrụgide. A na-enweta ya na flanges EN1092-2 2 PN10 ma ọ bụ PN16, ANSI B16.1 Klas 125. (typesdị ndị ọzọ dị na arịrịọ) Ihu ihu ihu ogologo dịka usoro DIN3202 F1. Nrụgide ọrụ na ọkụ 16bar gosiri na -10 Celsius C na 120 Celsius. Corrosion Protection internally na externally mmiri mmiri epoxy na-ese .. Ihe nkọwa Isi Isi awọ igba ígwè Bonnet isi awọ igba ígwè Kpaa ...
Nkọwapụta Valves na-akwado EN13789, MSS SP-85. Oche oche. Kemeghi azuokokoosisi akara. Mbukota replaceable n'okpuru nrụgide. A na-enweta ya na flanges EN1092-2 PN10 ma ọ bụ PN16, ANSI B16.1 Class 125. (typesdị ndị ọzọ dị na arịrịọ) Ihu ihu ihu ogologo dịka EN558-1 isi usoro 10 na ASME B16.10. Nhọrọ 150 psi dị. Ngwongwo ihe Isi Isi awọ igba ígwè Bonnet isi awọ nkedo iron Kpaa ọla kọpa Disc ọla kọpa Azuokokoosisi nchara